along - Synonyms of along | Antonyms of along | Definition of along | Example of along | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for along
Top 30 analogous words or synonyms for along
တာလီမြို့ Dali is nowamajor tourist destination, along with Lijiang, for both domestic and international tourists.
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် Despite the royal prohibition, the fortifications returned to the scene during the Burmese civil war of the 1750s, which featuredaseries of sieges by both sides. In the 19th century, forts along the Irrawaddy wasamajor part of Burmese strategy to defend againstapotential British invasion. In practice, however, they did little to withstand British firepower.
Pop punk The All-American Reject တီးဝိုင်းသည် "Move Along" (၂၀၀၅) album နှင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Pete Wentz ဂီတပညာရှင် (Fall Out Boy) သည် သူ၏ record label တွင် Panic at the Disco တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Decaydance တီးဝိုင်းသည် I Write Sins, Not Tragedies သီချင်းနှင့်အတူ အမှတ်ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ် MTV Video Music Award တွင် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဆုရရှိခဲ့သည်။ Avril Lavigne သည် "Girlfriend" သီချင်းနှင့် Billboard Hot 100 တွင်နံပါတ်တစ်နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ၏ အရောင်းရဆုံးသီချင်းဖြစ်လာခဲ့
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Shenzhen East Railway Station (Shenzhen Dong) was opened in December 2012. It was originally called Buji station after the suburb it is located and wasaGrade3station along the Guangshen Railway with no passenger services. Now after massive renovations, it currently handles mostly regional services.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် In response to organisational issues and high-profile mistakes made within the Air Force; all of the B-2s, along with the nuclear-capable B-52s, and the Air Force's intercontinental ballistic missiles (ICBMs) were transferred to the newly-formed Air Force Global Strike Command on 1 February 2010.
ကာရာအိုကေ ကာရာအိုကေカラオケ (kaɽaoꜜke)ဆိုသည်မှာ Kara နဲ့ okesutora ဆို​​သော ဂျပန်စကားလုံး နှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပါယ်သည် Empty Orcherstra ဖြစ်ပါသည်။ မူလအဆိုရှင်၏ အသံကိုဖျောက်၍ သီချင်းစာသားတွေ၊ သံစဉ်နဲ့အတူ ပေါ်လာတာကို လိုက်ဆိုတာပင် ဖြစ်သည်။ Sing along with mitch ရုပ်သံအစီအစဉ်သည် ၁၉၆၀−နှစ်ဦးပိုင်းတွင် အမေရိကန်ရုပ်သံ NBC က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သီချင်းစာသားများအား ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်၏ ​​​​​​​အောက်ခြေမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် ကာရာအိုကေ၏ ဖခင်မှာ ဂျပန်လူမျိုး ဂီတပညာရှင် Daisuke Inoue ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုဘေးမြို့တွင် ၁၉၇၁−ခုနှစ်များတွင် စတင်တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀−ခုနှစ်တွင် အာရှတိုက်သာမက ကမ္ဘာကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါသည်။
ဂျင်မီဟင်းဒရစ် ထို့နောက်တွင် Bold as Love နာမည်ကျော် Voo Doo Child နှင့် All Along The Watch Tower တို့ပါဝင်သော Electric Lady Land စသည့် အယ်လ်ဘမ်များ သွင်းယူခဲ့ပြီး နောက်တွင် ဂျင်မီဟင်းဒရစ်၏ အောင်မြင်မှု အရှိန်အဝါသည် ပို၍ကြီးမားလာခဲ့သည်။ နယူးယောက်ရှိ နာမည်ကျော် BB King, The Doors တို့နှင့်လည်း တီးခတ်တွဲဖက် ဖျော်ဖြေခဲ့ရသည်။ အမေရိကန် နှင့် ဥရောပနိုင်ငံ အသီးသီးတွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖျော် ဖြေတင်ဆက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကျော်ကြားတောက်ပခဲ့သော အနုပညာကြယ် တစ်ပွင့်သည် ၁၉၇ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ Nothing Hill ရှိ Samarkand hotelတွင် ကြွေလွင့်ဆုံးပါးခဲ့လေ၏။ ဂျင်မီဟင်းဒရစ်၏ ရုပ်အလောင်းကို အမေရိကန်၊ ဝါရှင်တန်သို့ ပြန်လည်သယ်ယူခဲ့ပြီး Green Wood Memorial Park တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ဂျင်မီဟင်းဒရစ် အမှတ်တရ ရုပ်တုကို ဝါရှင်တန်မြို့တွင် ထုလုပ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။